အပြာရောင်ကြေးနီ sulfate crystal ဟာ၏ Geode ကို
Geode crystals ်ကျောက်အမျိုးအစားဖြစ်၏။ ပုံမှန်အားဖြင့်အနှစ်သန်းပေါင်းများစွာမှရေနှင့်သတ္တုဓာတ်စီးသောအဘို့လိုအပ်သည် သိုက် crystals ။ သင်သာတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ကိုယ်ပိုင် '' Geode '' စေနိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် Geode စေရန်ကြက်ဥခွံအတွင်းမှကြေးနီ sulfate pentahydrate ၏လှပသောစအပြာ crystals မပေါက်ပါဘူး။
အချိန်လိုအပ်ပါသည်: 2-3 ရက်အတွင်း
ပထမဦးစွာသင် eggshell ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက သဘာဝအ Geode ပုံစံများကို တစ်ဦးဓာတ်သတ္တုအတွင်းပိုင်း။ ဤစီမံကိန်းအဘို့, တွင်းထွက်ပစ္စည်းတစ်ခု eggshell ၏ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရုတစိုက်တစ်ခုကြက်ဥဖွင့်လှစ်ဥဖယ်များနှင့် shell ကိုစောင့်ရှောက်ဖေါ်ထုတ်ဖို့။ shell ကိုကနေကြက်ဥကိုရှင်းလင်း။ shell ကိုနှစ်ခုရှက်ဖန်တီးရန်, စင်ကြယ်ချိုးဘို့ကြိုးစားပါ, သို့မဟုတ်သင်မယ့်တစ်ဦးထက်ပိုဘောလုံးကို-shaped Geode အဘို့, shell ကိုထိပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုပေမည်။
သီးခြားကွန်တိန်နာများတွင်ရေပူ၏ 1/4 ခွက်ကိုမှကြေးနီ sulfate ထည့်ပါ။ ကြေးနီ sulfate ပမာဏကိုတောင်းသည်မဟုတ်။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမကပိုပျော်လိမ့်မယ်သည်အထိရေထဲသို့ကြေးနီ sulfate နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။ ပိုများသော သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်ပါ! ဒါဟာလုပ်အစိုင်အခဲပစ္စည်းအနည်းငယ် pinch ယူသင့်တယ် ပြည့်ဖြေရှင်းချက် ။
သွန်းလောင်း ကြေးနီ sulfate solution ကို ပု eggshell သို့။
က 2-3 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဘေးလွတ်သောနနေိုငျရှိရာတည်နေရာတစ်ခုအတွက် eggshell ချထားပါ။ သငျသညျကိုကျော်ကျသွားရာမှစောင့်ရှောက်ရန်နောက်ထပ်ကွန်တိန်နာအတွင်း eggshell နေရာလိုပေမည်။
နေ့ရက်တိုင်းသင့်ရဲ့ Geode စောငျ့ရှောကျ။ crystals ပထမဆုံးနေ့၏အဆုံးအားဖြင့်ပေါ်လာသငျ့သညျမြားနှငျ့ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယတစ်နေ့ပြီးသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှာဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျအဖြေကိုသွန်းလောင်းနဲ့သင့် Geode ကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်ခန်းခြောက်ဖို့သို့မဟုတ်သင်ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝ (တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခု) အငွေ့ပျံကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ရေအပူချိန်ကိုပင်သေးငယ်တဲ့တိုးကိုအလွန်ပျော်လိမ့်မည်ဟုကြေးနီ sulfate (CuS04။ 5H20) ပမာဏကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
ကြေးနီ sulfate မျိုလျှင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အသားအရေနှင့်ချွဲအမြှေးပါးစိတ်ဆိုးနိုင်ပါတယ်။ အဆက်အသွယ်၏အမှု၌, ရေနှင့်အတူအသားအရေသုတ်ခြင်း။ မျိုခဲ့လျှင်, ရေကိုပေးနှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုခေါ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ချော Geode သိမ်းထားဖို့လိုလျှင်, အလုံပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်းစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်ကြေးနီ sulfate pentahydrate crystals, ရေဆံ့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ရေမှိုင်းများနှင့်မှုန့သူတို့ကိုစွန့်ခွာ, အ crystals ကနေအငွေ့ပျံပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်စိမ်းမှုန့်ကြေးနီ sulfate ၏ anhydrous ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ကြေးနီများအတွက်ရှေးကသြောအမည် (II ကို) sulfate အပြာမှိုင်းတိုက်သည်။
ကြေးနီ sulfate သွေးအားနည်းရောဂါအဘို့, algicides နှင့် fungicides အတွက်အထည်အလိပ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၌၎င်း, တစ်ဦးကာလဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ကြေးနီများတွင်လည်းကောင်း, သွေးစမ်းသပ်မှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဂေါက်ကွင်းအတွင်းအချပ်ဆိုတာဘာလဲ သငျသညျတစျခုရှိပါလျှင်, ထိုအဘယ်အရာကိုကူညီပေး?
အဆိုပါ Visual Arts အတွက် Rhythm ရှာဖွေခြင်း
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးကတရုတ် Fortune မဂ္ဂဇင်း Teller မှစ. မျှော်လင့်ရန်
2018 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
အများစုမှာအလုပ်ရှာဖွေရေးတစ်ကောလိပ် Quarterback အားဖြင့်ခြံကောင်တွေ
ပန်းချီ Techniques: ချနေတဲ့ရေချိုး
ဂရိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း - ရှေးဟောငျးဂရိဘုရားအဘို့အ Residences
တရာနှစ် '' စစ်ပွဲ: Poitiers ၏တိုက်ပွဲ
တစ်ဦး Homeschool ဇယားဖန်တီးနည်း
အဆိုပါမျိုးစိတ်သစ် Concept ကို
အင်္ဂလိပ်အတွက်တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျများ Leave လုပ်နည်း